Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo ka hadlay Kulankii Jaamacada Carabta ay ka yeesheen Xaaladda Soomaaliya • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo ka hadlay Kulankii Jaamacada Carabta ay ka yeesheen Xaaladda Soomaaliya
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo ka hadlay Kulankii Jaamacada Carabta ay ka yeesheen Xaaladda Soomaaliya
September 19, 2010 - By: Abdirahman. A
Wasiirka arrimaha dibadda ee Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa ka warbixiyey kulan dhowaan uu ka qaybgalay oo ay yeesheen wadamada xubnaha ka ah Jaamacada Carabta kaas oo looga hadlay arrimo ay kamid ahayd Xaaladda Soomaaliya.
Dhegayso: Safiirka Soomaaliya u Fadhiya Dalka Masar oo Ka Waramaya Shirka:-
Mudane Yuusuf Xassan Ibraahim “Dheeg” oo saxaafada kula hadlaayay magaalada Qaahira ee caasimada dalka Masar ayaa sheegay in kulankaas uu ahaa mid looga hadlayay sidii loo taageeri lahaa Dawladda Soomaaliya.
Wuxuu sheegay in madaxda Jaamacada Carabta ay si wadajir ah isku raaceen in wax laga qabto xaalada murugeysan ee xiligaan ka jirta Soomaaliya iyada oo diirada la saaray sidii xal loogu heli lahaa dagaalada aan dhamaadka lahayn ee ka soconaaya dalka.
Kulanka Jaamacada Carabta oo uu Yuusuf Dheeg u matalaayay Soomaaliya wuxuu sheegay in si wanaagsan kusoo dhamaaday isla markaana balanqaadyo loo sameeyey Dawladda Federaalka.
Balanqaadyada ay Jaamacada Carabta u sameysay Soomaaliya ayaa kamid ahayd in ay bixiso bil weliba lacag gaaraysa $10-milyan oo doolarka Maraykanka.
Kulanka Jaamacada Carabta ay ku yeesheen dalka Masar ayaa sidoo kale looga hadlay arrimo kale oo ay kamid ahayd arrimaha wadamada Falastiin iyo Ciraaq.